प्रधानमन्त्री को गुनासो:- पहिलेः नक्सा किन जारी गरिनस् ? अहिलेः किन छलफल गरिनस्। – Namaste Dainik
May 30, 2020 NamastedainikLeaveaComment on प्रधानमन्त्री को गुनासो:- पहिलेः नक्सा किन जारी गरिनस् ? अहिलेः किन छलफल गरिनस्।
काठमाडौँ । लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक(राजनीतिक र प्रशासनिक)नक्सा समेटेर संविधान संसोधन गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक छलफल सुस्त छ । जबकी यही विषयमा छलफल गर्न र अनुमोदन गराउन विपक्षी कांग्रेसले शनिबारका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा जेठ २ गते पार्टी सचिवालयमा बैठक भए पनि त्यसपछि नेकपाले यसबारे छलफलका लागि कुनै तहको बैठक बोलाएको छैन । सके केन्द्रीय कमिटी नभए स्थायी कमिटीबाट संस्थागत निर्णय लिन नेताहरुकै सुझाव छ,जसले अपनत्व बढाउने र कार्यान्वन सजिलो हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आन्तरिक छलफल नभएको नेकपामा नयाँ नक्सा राखेर संविधान संसोधन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पनि ओझेलमा परेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य यूवराज ज्ञवालीले यस्ता विषय पहिल्यै पार्टीभित्र छलफल हुँदा निर्णय कार्यन्वयन सजिलो हुने बताउँछन् । ‘सीमा समस्या,कोरोना,नीति तथा कार्यक्रम,बजेटलगायतका विषयमा पहिल्यै पार्टी कमिटीमा छलफल हुनुपर्दथ्यो ।केही हदसम्म सचिवालयमा छलफल भए होला,
’ज्ञवालीले भने,‘नक्सासम्बन्धी संविधान संसोधनबारे छलफलका लागि काँग्रेसले बैठक बोलाएको छ । कमिटी प्रणालीबाट चल्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यति पनि भएन । ठूला मुद्धाहरुमा पार्टीले छलफल गरेर निर्णय गरेपछि अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर भईराखेको छैन । यो गलत हो ।’ स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेल पनि राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन मुद्दामा पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने मत राख्छन् ।‘राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन मुद्दामा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । यस्ता मुद्दामा पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर सरकारले कार्यान्वय गर्दा राम्रो हुन्छ ।
सीमा समस्याको मुद्दामा गत बर्ष स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको हो,’पोखरेलले भने,‘तर,नक्सा प्रकाशित गर्ने विषय पार्टीमा औपचारिक निर्णय हुन सकेको थिएन । बीचमा यो मुद्दालाई उपहासपूर्ण ढंगले लिइयो । भूमिसुधार मन्त्रीले मैले यस्तो नक्सा देखेकै थिइनँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि नक्सा छाप्न त प्रेसमा जति छापे नि भईहाल्यो भन्दै आउनु भएको थियो । तर,नीति कार्यक्रम आउने दिन बसेको सचिवालय बैठकले नक्सा प्रकाशित गर्न सुझाव दियो ।
प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रमको ब्रिफिङ् गर्नेक्रममा नक्साको कुरा थिएन ।’ व्यक्तिगत र अनौपचारिक रुपमा नेताहरुका धारणा भने आईरहेका छन् । तर,नक्साको जस कसले लिने भन्नेमा नेकपाकै नेताहरुबीच सार्वजनिक रुपमासमेत होडबाजी चलेको छ । नीति तथा कार्यक्रम आउने दिन बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेताहरुले नयाँ नक्सा जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । सुझाव कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्री, पार्टी र सिंगो देशलाई फाइदा भएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको बुझाई छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
पोखरामा पारस शाहसँग जहाँपनि एकसाथ देखिने यी युवती र बच्चा को हुन् [पुराविवरणसहित]